काँग्रेस जनादेश विरुद्ध जानु हुँदैन : नेता श्रेष्ठ – Saurahaonline.com
काँग्रेस जनादेश विरुद्ध जानु हुँदैन : नेता श्रेष्ठ
गोरखा १० पुष । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेस जनादेशको विरुद्धमा जान नहुने बताएका छन् । गोरखामा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।
निर्वाचनमा देशैभरी बामगठबन्धनका नेताहरुको विजयी हुँद पार्टी एकताका सुत्रधार समेत रहेका श्रेष्ठ गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट विजयी हुन सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गरेको अवस्थामा श्रेष्ठले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए । एकल संक्रमणीय विधि अपनाएपनि काँग्रेसले पहिला नमानेको र बहुमतिय विधि संसदमा पेश गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि काँग्रेसले फेरी एकल संक्रमणीय विधि अनुसार अध्यादेश ल्याएको उनको भनाई छ । अहिलेको संविधानले केही पनि नभनको , सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकोले एकल संक्रमणीय विधि लागु गर्न कठिन रहेको उनले बताए । बहुमतिय विधि सरकारले हुबहु लागु गर्न सक्छ भनेर राखियो तर अध्यादेशबाट यसलाई उल्टाउन खोजेको श्रेष्ठले बताए । एकल संक्रमणीय विधिमा जानै हुन्न भन्ने नरहेको उनको भनाई छ । तर लोकतान्त्रिक मान्यता के हो ? अध्याधेश पहिला संविधानमा ल्याएको विधेयकको विरुद्ध पेश गर्न नमिल्ने बताए । लोकतान्त्रिक विधि विरुद्ध काँग्रेस गएकोले आवश्यक लचतकताका साथ सम्झौता र सहमतिको स्प्रिट अनुसार निकास निकाल्न आफूहरु तयार रहेको नेता श्रेष्ठले बताए ।
कुनै पनि ढंगले जनादेशलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । दुई तिहाई बामगठबन्धनको अभिमतबाट स्थायी सरकार बनाउन हामी लागि पर्ने छौं । प्रतिपक्षहरुसँग सहमति सहकार्य र एकता गर्दै अगाडी बढ्ने छौं ,प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नु हुनेछ । आजको राजनीतिक यथार्थलाई ध्यान दिएर निकास निकाल्नुपर्दछ र कुनै सम्झौताका साथ सहमति गरेर अगाढि बढ्न्ु पर्दछ भने पनि हामी तयार छौं । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन परिणामको विषयमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले भने “निर्वाचनको परिणामका विषयमा हामी पार्टी भित्र र बाम गठबनध्नमा बस्तुनिष्ठ ढंगले समिक्षामा जुटिरहेका छौ । यो पटक गोरखाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का जनताको चयनमा हामी परेनौं । तर जसले मत दिनुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ र हामी सबैको सेवा लाग्छौं । ” अहिलेको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनलाई प्राप्त जनादेश भित्र बाम एकता आदेश पनि छ । पार्टी एकताको पक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न चाहन्छौं । सरकार गठन अगाडी पार्टी एकता होस भन्ने चाहना हो । पार्टी एकता र सरकार गठनको प्रक्रिया अलग कुरा भएकाले अघिपछि हुन सक्ने उनले बताए ।
बामपन्थी गठबन्धन बनाएर देशमा सामाजिक न्याय सहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने संकल्प लिएर बामगठबन्धन गरेको उनले बताए । पार्टी एकता प्राविधिक कारणले केही समय ढिलो भएको बताउँदै एकदूई दिन भित्रै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नेत नेता श्रेष्ठले बताए ।